Habkani Fudud Ayaad Kaga Takhalusi Kartaa Caajis Oo Dhan..Isku Day | Xaqiiqonews
Habkani Fudud Ayaad Kaga Takhalusi Kartaa Caajis Oo Dhan..Isku Day
Dad badan oo naga mid ah waxa ay soo iibsadaan buugaag, laakin waxaa dhacda in aysan aqrin xitaa hal warqad, qaar kale waxa ay leeyihiin “Aragtiyo Wanaagsan” sida in ay ka baxaan shaqaalenimo oo ay abuurtaan ganacsi u gaar ah, balse waxaa suuragal ah in cimragooda ay ku dhameystaan shaqadii koowaad, hadaba waa maxay Sirta?
Waxaan ku weydiinayaa xisaab caqliyeed fudud, Hadii 5 shimbir ay geed saaranyihiin, oo 4 ka mid ah shimbiraha ay go,aansadeen in ay duulaan imisa shimbir ayaa geedka ku hartay? dabcan waxa aad ku jawaabeysaa hal shimbir, laakin jawaabta saxda ah ayaa ah 5 shimbir ayaa geedka wili saaran, maxaa yeelay waxaa jiro farqi u dhaxeeya “Go,aansasho iyo Ficil Sameyn”.
Qof walbo waxa uu leeyahay Yool hase ahaate qof walbo yoolkaasi iskama gaaro, nagumana filna inta aan indhaha isku xirno oo aan filano in wax waliba iskood iskaga dhacaan, waa lagama maarmaan in aan sameynaa “Ficil(waxqabad”)
Ka soo qaad waxaa rabtaa in aad qorto buug ama in aad barato luuqad cusub, ka dib go,aan walbo oo aad qaadatay, waxa laga yaabaa in aad bilowday ka fikirka go,aakaada-hase ahaatee waxa aad si sahal ku lumin kartaa qeybta ugu muhiimsan oo ah “Ficilka”.
-Iska Jooji Cabsi.
Sababta ugu badan ee naga hor istaagta in aan howl qabano waa Cabsida, Inkastoo Cabsida ugu badan ee na soo wajahdo ay tahay in aan ka sii cabsano Guul-darro, willi waxaa jiro noocyo kale oo cabsi waxaana ugu muhiimsan
Sidoo Kale Aqri Qaabkan Fudud Ayaad Kaga Guuleysan Kartaa Cabsi Iyo Walwal dhan..Tijaabi
Cabsi Dadka kale- waxaa dhici kartaa in aan shaqadeena ama howshii inoo tiilay aan u joojino ama aan u sameyni kari weyno annaga oo ka cabsaneyna waxa ay naga aamini karaan dadka kale, ama waxaa na hor istaaga in aan sii saadaalino in howshani aysan raali geli doonin dadka kale.
Si aad uga gudabtaa qodobkani waa in aad niyadda ku heysaa in dadka kale aysan aheyn sida aad u maleyso, ogowna shay walbo oo cajiib ah oo aad la timaato ma wada raali gelin doonto dadka oo dhan, sidaa darteed ka fikir howshani sidee adiga u aragtaa , ka dibna dhaqaaq, waxaadna farxi doontaa markii aad aragto dad badan oo arintaada ay soo jiidatay.
Cabsi guul-darro- waxaa jirta maahmaah shiineysa oo dhaheysa:
“hadii aad kufto u jiifo dhabar dhabar” si ay kugu sahlanaato in aad aragto waxyaabaha kore, si markale aad u soo kacdo”
Maahmaah shiineys ah
xasuusnow in guul-darrada ay tahay muhiim, maxaa yeelay Macalinkaaga ugu wanaagsan waa khaladkii ugu dambeeyey ee aad sameyso, mar walbana niyadda ku haay maah maahda soomaaliyeed ee dhaheysa
“Geedkii orad lagu fuulo orad ayaa looga soo dagaa”
-Iska Ilow Meermeerin.
Wiligaa ma aragtay shaqo ay aheyd maanta in aad qabato in aad dib u dhigtay? sidee ku bilowday? kaliya markii koowaad waxa aheyd bandhig u muuqda mid wanaagsan “saacad kaliya ka naso ka dib dib bilow” balse saacadii waxa ay isku badashay maalin, maalintiina bil, ka dibna sanad sidaasna waxaa aad ku lumisay fikirkii oo dhan.
Meer meerinta waa dilaa halis ah, waxa uuna lumiyaa fikradaha iyo Yoolalka, hadiise aad rabto in aad ka gudubto caqabaddan xalka kaliya ee ku horyaalla ayaa ah “hadda sameey” , ma jirto waqti habboon oo wax waliba ay hagaagi doonaan, dib ha u dhigin hadda sameey.
Waqtiga ugu haboon ee shaqadani in la qabtaa ay aheyd waa 2 sano ka hor ama 5 sano ka hor, hadiise ay dhicin, hadda Sameey. Maya 2 sano ama 5 sano hadda ka dib ma heysan doontid fursadaha hadda ku horyaalla.
-Iska Ilaali Isku Dhax Yaaca
Isku-dhaxyaaca halkan waxa aan ula jeeda in aadan laheyn Diirad, diirad la,aanta waa cadowgaada ugu weyn, xitaa ka hor inta aadan howsha bilaabin iska sii baa,bi wax waliba oo ku keeni kara iska dhax-yaac, tusaale iska soo xir baraha bulshada.
Isku dhax yaaca waxaa kale oo uu ka yimaada gudaha naftaada(waana kan ugu xun), shaki iyo cabsi aad ka qabto howshaan ayaa waxaa laga yaaba in caqilkaada uu ku tuso howl kale oo ka fudud, si aad uga hortagto isla markiiba uu shakiga ku galo isku day in aad maskaxdaada ka saarto, isna tus in aad tahay qof ku socda Yool cayiman.